USB port မှာ Stick ထိုးပြီး နားထောင်လို့ရတဲ့Soundbox
Friday, 26 Feb 2010
ပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကရိ ကထမများဘဲ သုံးလို့ရတဲ့ soundbox လေးပါ။SD cardသုံးပြီး သီချင်းတွေ၊ အသံတွေ နားထောင်လို့ရပါတယ်။ Volume အတိုးအလျှော့ရပြီး လျှပ်စစ် မီးကြိုးနဲ့လည်း ချိတ်ဆက်သုံးလို့ ရပါ တယ်။ Charging သွင်းပြီး သုံးဖို့ အား သွင်းတဲ့ကြိုးလေးလည်း ထည့်ပေးထား ပါတယ်။ Remote နဲ့လည်း သုံးနိုင်ပါ တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံလုပ်ဖြစ်ပြီး အနော် ရထာလမ်းနဲ့ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ထောင့်က Central Supermarket မှာ တစ်လုံးကို နှစ်သောင်းတစ်ထောင်ကျပ်နဲ့ဝယ်လို့ ရပါတယ်။
1. AN-9 15800 Ks2. MK-2 15500 Ks3. MD-F3 13500 Ks4. MD-F6 15500 Ks5. Sd-7 14500 Ks
Friday, 19 Feb 2010
အိမ်ရှင်မတွေ ကြက်ဥ၊ ဂျုံနဲ့ အခြားမွှေစရာရှိတာတွေကို အားစိုက်စရာမလိုဘဲ အဆင်ပြေပြေ မွှေနိုင်ဖို့ အတွက် KHIND တံဆိပ် Standard Mixer ပါ။ အောက်ခံခွက်ပါလည်ပြီး မွှေပေးပါတယ်။ မွှေတဲ့နေရာမှာ အနှေးအမြန် ဆင့်ငါးဆင့်ပါလို့ စိတ် ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး မွှေနိုင်ပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံလုပ်ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းက ကျပ် ၄၉၀၀၀ ပါ။ တစ်နှစ် Wrantty ပေးပါတယ်။ ပြည် လမ်း စိန်ဂဟာစူပါမားကတ်မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
အတွCARIBBEAN 30 ml 25000 KsCARIBBEAN 50 ml 49000 KsCARIBBEAN 75 ml 55000 KsWing & Femme 30 ml 25000 KsWing & Femme 50 ml 49000 KsWing & Femme 70 ml 55000 KsFREEGOM 30 ml 25000 Ks
အချိန်ကြာကြာ Timer ပေးလို့ရတဲ့ Aircooler
Mistral aircooler ဟာ အကျယ်အဝန်း ၃၂ ပေအထိ ကို အအေးဓာတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အအေးဓာတ်ပေးဖို့အတွက် ရေခဲ ခြောက်သုံးစရာမလိုဘဲ ရိုးရိုးရေကိုပဲ သုံးလို့ရတဲ့အတွက် ကရိ ကထမများတော့ဘူးပေါ့။ စက်အတွင်းမှာ ရေကို အေးမြ နေစေဖို့ အတွက် ရေတံခွန်က ရေတွေကျနေတဲ့ ပုံစံမျိုးထုတ် လုပ်ထားပါတယ်။ အချိန် ၈ နာရီအထိ Timer ပေးလို့ရပါ တယ်။ Remote Control လည်း ပါပါတယ်။ လေအေးစက်ရဲ့ အောက်ခြေမှာ ဘီးလေးတွေတပ်ထားလို့ လိုတဲ့နေရာကို အ လွယ်တကူ ရွှေ့ပြီးသုံး နိုင်ပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံလုပ် ဖြစ်ပြီး မော်ဒယ်က MAC 200 ပါ။ ကျပ်တစ်သိန်း ခုနစ်သောင်းနဲ့ ပြည်လမ်း စိန်ဂေဟာစူပါမား ကတ်မှာ ဝယ်လို့ရပါတယ်။
DNA home police ရေမွှေးဟာ သနပ် ခါးနံ့ စူးစူးလေး မွှေးစေတဲ့ ရနံ့မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုး သမီးသုံးနဲ့ အမျိုးသားသုံးဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတဲ့အနက် အမျိုးသားသုံးက အနက်ရောင် ပုံစံလှလှ ပုလင်းလေးပါ။ အမျိုးသမီးသုံး ကတော့ အဖြူရောင် ပုလင်းပါ။ 75 ml DNA home police ရေမွှေး တစ်ပုလင်းကို ကျပ်ငါးသောင်းခွဲ ဈေးနဲ့ စိန်ဂေဟာ စူပါမား ကတ်မှ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် Viewsonic mini PC
View Sonic ရဲ့ mini PC VOT 120 မှာ CPU က Intel Atom N270@1.6 GHz ပါ။ာmemory က 1 GB DDR2 ဖြစ်ပြီး2GBအထိတိုးမြှင့်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ 160 GB HDD (SATA) ပါရှိပါတယ်။ mini PC VOT ရဲ့ အရွယ်အစားက39 x 130 x 115 mm သာ ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်စားပွဲတင် PC တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်း ၂.၀ လေးခု ပါရှိပြီး၊ data transfer က 480 Mbpsအထိရှိလို့ မော်နီတာ များနဲ့တွဲသုံးပြီး ပုံရိပ်တွေကို ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ထွက် ပေါ်စေမှာပါ။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့ နယ် ၈၇ လမ်းက Royal Ayeyarwaddy မှာ တစ်လုံးကို ကျပ် သုံးသိန်းလေးသောင်း ဝန်းကျင်ဈေးနဲ့ ဝယ်လို့ရပါတယ်။
NIBBAN AC5F 503000 Ks SAKURA SALD 99 57000 Ks Midean AC 200 E 60000 Ks T.Home THACS 0909 68000 Ks ELSA YS01 70000 Ks
အနှိပ်ခံဘုလေးတွေ စုစုပေါင်း ၄၁ ခုပါဝင်တဲ့ ဖိနပ်ပါ။ ဘုလေး တစ်ခုချင်းစီက အကြောတက်တဲ့အခါမှာ လည်ပင်းကြော၊ နားကြော၊ အဆုတ်၊ ကျောက်ကပ် စသည်ဖြင့် အသီးသီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အကြောတက် တဲ့အခါမှာ တစ်ခါကို ၁၅ မိနစ် စီးပေးရပါတယ်။ Spring Acupuncture တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံလုပ်ပါ။ မော် ဒယ်က KW 313 ဖြစ်ပါတယ်။ စီး ထားစဉ်မှာ ခြေထောက်တော့ အနည်းငယ် နေရခက်ပါတယ်။ တစ်ရံကို ကျပ် တစ်သောင်းခွဲနဲ့ ပြည်လမ်း၊ စိန်ဂေဟာ စူပါမားကတ်မှာ ဝယ်လို့ရ ပါတယ်။
ခရီးသွားတဲ့အခါ Lenovo ideapad Y450 နဲ့မှ
နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းတွေကို ခရီးသွားရင်း ကစားချင်တဲ့သူတွေအတွက် Graphicလိုအပ်ချက်များတဲ့ လပ်တော့တစ်လုံးနဲ့မှ အဆင်ပြေမှာပါ။ Lenovo ရဲ့ ideapad Y 450 ဟာ ဒီလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ခရီးသွား ဖျော်ဖြေ ရေး စက်တစ်ခုအနေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ CPU က Intel Corez Duo P7550 ဖြစ်ပြီး၊Memory u2GB DDR3 ဖြစ်ပါတယ်။ 500 GB HDD ပါပါတယ်။ Graphic အနေနဲ့ Ge Force G 210M 512 MB ဖြစ်ပြီး၊DVD Super Multi Drive (DVD-RW) ဖြစ်ပါတယ်။ 1.3 MP Carmera နဲ့6in 1 cardreaderလည်း ပါပါ တယ်။ Display က 14.1" w x GA LED Back Light ပါ။ LAN WiFI ? Bluetoothတို့လည်း ပါပါတယ်။ တစ်လုံးကို ကျပ်ရှစ်သိန်းကျော်ကျော်ဈေးရှိပြီး KMD အရောင်းစင်တာတွေမှာဝယ် ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Audio Source မျိုးစုံနဲ့တွဲဖွင့်နိုင်တဲ့ စပီကာ
Notebook Colling Pad
Brother ရဲ့ 6-in-1 ကာလာလေဆာ ပရင်တာ
ထူးခြားချက်များနဲ့ Fountain Type ရေသန့်စက်
Bluetooth မရှိတဲ့ ကွန်ပျုတာတွေအတွက် Bluetooth USB
သီချင်းတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကောင်းကောင်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့ i Pod
ပုံစံသစ် Portable DVD